PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - LUCKY CAIN
BAMBALWA abalaleli abayoke bamlibale noma balikhohlwe iphimbo likalinda “Mr Magic” Sibiya emsakazweni, ikakhulukazi abazifela ngokhozi FM.
UMR Magic ungomunye wabasakazi abayibekile induku ebandla kwezokusakaza. Nakuba egcine ukuzwakala emoyeni kwiVuma FM eminyakeni emibili edlule kodwa uzakhele udumo okhozini lapho echithe khona iminyaka engu-17 eshayela izinhlelo ezahlukene.
Uxoshwe kulo msakazo eseshayela olwasekuseni, ivuka Breakfast Show, esiphethwe nguSipho “Sgqemeza” Mbatha novukile Nongcebo Mckenzie.
Nakuba sekuphele cishe iminyaka emine agcina ukuzwakala okhozini FM, kodwa umr Magic uma sihlangana naye emahhovisi akhe asendaweni yomtakabani, epoint Waterfront, ethekwini, ukusho kwagcwala umlomo ukuthi usenesilonda esingakapholi ngokhozi FM.
Langesonto, uthe okubuhlungu kakhulu ngalo msakazo wukuthi kawumnikanga ithu- ba lokuvalelisa kubalaleli bawo abese bephenduke ingxenye yempilo yakhe.
“Uyabona ukungalinikwa ithuba lokuvalelisa okhozini yikhona okubuhlungu kunakho konke,” kusho umr Magic enanela ngokuthi uma engase anikwe elinye ithuba okhozini angaligxumela.
“Ngeke ngiqambe amanga, ngisakulangazelela ukuba sokhozini,” esho evuma ukuthi wenza iphutha ngokujaha ukujoyina ivuma FM, engakakudlulisi okwasokhozini.
“Engingakusho wukuthi ngajoyina ivuma ngisadiniwe ngendlela ukhozi olwangichitha ngayo,” kusho umr Magic ejika nasebusweni.
UMR Magic akafunanga ukungena agxile ngokuchithwa kwakhe okhozini FM.
“Ngeke ngikhulume izinto eziningi ngokwenzeka, kodwa iqiniso liyaziwa,” eshaya ngamafuphi. UMR Magic uthi nakuba esenentshisekelo yokuba semsakazweni kodwa uyajabula ngegxathu lakhe kwezamabhizinisi.
“Nginamahhovisi egoli nasethekwini kanti maduzane sizokwethula izikhungo ezahlukene ngaphansi kwemagic Media Group, okubalwa esizofundisa ngokukhuluma ngokuzethemba phambi kwabantu, esizofundisa ngokusakaza nokuqeqesha iphimbo nokuvula umsakazo ozokuba online, imagic Radio,” esho ekhombisa okukhulu ukuzethemba.
Uphinde wadalula ukuthi nomjikelezo wakhe, imagic Tour, ukhuza ibuya kodwa ngokwehlukile kulokhu.
“Sizohambela omasipala Kwazulu-natal lapho sizokwakha ukuxhumana kubaholi bamaqembu nabantu abasha. Ngeke sisazihambela izikhungo zemfundo ephakeme manje, sifuna ukunika abantu abasha nabaholi bamaqembu indlela yokuxhumana njengoba kuza ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo,” esho enanela ngokuthi bazobe behambisana nabakwa-iec, okuyinhlangano eyengamele ukhetho kuleli.
UMR Magic uthi kumhambela kahle ngokwamabhizinisi nakuba zikhona izingqinamba kodwa ngenxa yokuthi unombono, uyakwazi ukubhekana nazo.
Uthi usaqhubeka nokuphatha izinhlelo emicimbini kanti usazethula futhi nezinkulumo ezikhuthazayo.
Uphinde wacacisa ngokuthi unobudlelwano obuhle nomfu Sthembiso Zondo njengoba esazimisele ngokuqhubeka asebenze naye kwezinye izinhlelo anazo. Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwaba nemibiko yokuthi usezinhlelweni zokutha